Coral Reef: Blogger, Blog & Sherlock
Ma Tint said on August 31, 2014 at 5:40 AM
ဘလော့ဒေး အမှတ်တရလေးကနေ မသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရသွားတယ် ဇွန်ရေ.. အမှန်က တီတင့်က ပြန်တောင်းပန်ရမှာပါ ဇွန်က လူမမာကြည့်နေရတဲ့သူလေ ဆုံဖြစ်အောင်ဆုံကြမယ်... ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဇွန်လေးရေ ...
T T Sweet said on August 31, 2014 at 5:18 PM
Miss you too sis. I also remember that day, we all enjoyed the event. When will you come back? Please let me know!!
ညိုလေးနေ said on August 31, 2014 at 8:51 PM
Happy Blog Day Dear !
ညီလင်းသစ် said on September 1, 2014 at 2:15 AM
ဇွန်က ရှားလော့ခ်ဟုမ်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဂဃနဏ သိနေတာပဲကိုး..၊ ဘလော့ဂ်ကို စိတ်ဝင်တစား ရှိနေဆဲလို့ သိရတာ ဝမ်းသာရသလို ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် ပို့စ်လေးကလည်း အမှတ်တရပါပဲလေ…။
ဇွန်မိုးစက် said on September 2, 2014 at 12:05 AM
တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူး တီတင့်ရေ။ တီတင့်ဖိတ်တိုင်း မလာဖြစ်တာက ဇွန်ပါ။ နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ ကြိုးစားပြီး ဆုံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။း)
ှSure, sis T T Sweet. I will let you know if I happen to come back to Syd. :)
Same to you par, dear Nyo! :)
အစ်ကိုညီလင်း... ရှားလော့ခ်ဟုမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်... 'ဒါ့ထက်တောင်ပိုသေး' လို့ ဇွန်က ပြန်ပြောချင်တာ... အဟား...ဟား...ဟား။ :D
စံပယ်ချို said on September 4, 2014 at 1:45 AM
Happy Blog Day ကိုနုတ်ဆက်ဖို့ရောက်လာပြီးမှ
ဇွန်မိုးစက် said on September 4, 2014 at 11:09 PM
သတိတရနဲ့ လာနှုတ်ဆက်တဲ့ အစ်မစံပယ်ကို ကျေးဇူတင်ပါတယ်။ Happy (belated) Blog Day to you too! :)
ရင်ငြိမ်းသူ (Yin Nyein Thu) said on September 22, 2014 at 8:04 PM
တော်တော်ကြီးနောက်ကျပြီးမှ ဟက်ပီးဘလော့ဒေးပါ မဇွန်